थपियाे गृहमन्त्री बादलकाे उत्साह, अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सिन्डिकेट ताेड्ने ! – Everest Dainik – News from Nepal
थपियाे गृहमन्त्री बादलकाे उत्साह, अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सिन्डिकेट ताेड्ने !
काठमाडौं, बैशाख २४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातको सिन्डिकेट टुंगोमा लागेसँगै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सिन्डिकेटमा पनि कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटमा सम्झौता नगरेका थापाले देशको अर्थतन्त्र माफियाको कब्जाबाट मुक्त गर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ, अर्को स्टेप त्यतातिर चाल्दैछौं, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीसँग सिन्डिकेट समस्याबारे छलफल गर्दै गृहमन्त्रीले आइतबार भने, मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल, नोकरशाह र माफियाको हातबाट जनताको हातमा पुर्याउँछौं । उनले ट्रक तथा ट्यांकरका क्षेत्र र लागू औषधको सिन्डिकेटमा पनि अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।
माफियाको हातमा अर्थतन्त्र रहेसम्म मुलुकमा विकास र समृद्धिसमेत सम्भव नभएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।
सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ, त्यही विश्वाससहित यो कदम उठाएका छौं, विगतमा पनि सिन्डिकेटविरुद्ध कदम उठाउँदै छाड्दै गरेको स्मरण गर्दै उनले भने,अहिले त्यो कदमबाट फर्कने छुट छैन । अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ । जनताले म्यान्डेट दिएका छन्। जनताको म्यान्टेड र आदेशलाई इमान्दारी र साहसपूर्वक अगाडि बढाएका छौं ।
जग्गा बेच्न पनि दलालको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक रहेको बताउँदै गृहमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि तोड्ने बताए । अहिले सुरुआतमा हो, सुरुआत कहींबाट गर्नुपर्थ्यो। यातायातबाट गरेका छौं । श्रृंखलाबद्धरुपमा अरु सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ,उनले भने ।
राजनीतिक संरक्षणमा दलालहरुले अर्थतन्त्र कब्जामा लिएको भन्दै गृहमन्त्रीले नीति निर्माता तहबाट भएका गलत प्रवृत्तिहरुलाई सहन नसकिने पनि बताए । गृह मन्त्रालय बोल्डली जान्छ शंका गर्नुपर्दैन,उनको आश्वासन थियो ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अहिलेको जस्तो बलियो सरकार नेपालको इतिहासमा फेरि बिरलै बन्न सक्ने भन्दै सबै विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने दायित्वबाट बिमुख नहुन सुझाव दिए ।
ट्याग्स: rambahadur thapa 'badal'
टेक बहादुर चोखाल मेमोरियल कप फुटसल प्रतियोगिता हुने
३३ दिनमा एक वर्ष हुने पृथ्वी
खेलाडी बनेर युरोप छिर्न लागेका शरणार्थी एयरपोर्टबाटै समातिए
रक्तबिजको आन्दोलनः बाँच्न र पढ्न देऊ
अर्थमन्त्रीको ‘चामल’ दोकान
युएईमा संबिधान दिवस मनाईयो
गाडी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेमा प्रहरीले कारबाही गर्ने
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्न नसकिए विघटनको खतरा- प्रचण्ड